Madaxweynaha Muslimiinta Aduunka Ahna Madaxweynaha Dalka Turkiga Oo Gaashaanka Udaruuray Hadalo Kasoo Yeedhay Wadamo Kala Duwan Oo Sucuudigu Ugu Horeeyo[Jawaab Xasaasiya] | 18 May News
Madaxweynaha Muslimiinta Aduunka Ahna Madaxweynaha Dalka Turkiga Oo Gaashaanka Udaruuray Hadalo Kasoo Yeedhay Wadamo Kala Duwan Oo Sucuudigu Ugu Horeeyo[Jawaab Xasaasiya]
October 10, 2019 - Written by Editor2
Madaxwaynaha Turkiga Rejjeb Dayib Erdogan oo goor dhawayd Baarlamaanka dalkiisa la hadlayay ayaa si cadho leh ugu jawaabay wadamo u Sucuudigu u horreeyo oo ka soo horjeestay Duulaanka uu ciidankiisu ku qaaday Kurdiyiinta Suuriya.
Erdugan ayaa isagoo waddan waddan ugu jaawaabaya waxaa uu yidhi:
– Sucuudiga waxaan leeyahay; Muraayad soo qaado oo bal adigu dib iskugu fiiri, maaha in aad duulaankayaga ka hadasho adoo kumanaan qof Yemen ku laayay, waana in lagula xisaabtamo.
– Siisiga Masar waxaan leeyahay; ma ahan in aad adigu dimuqraadiyad ka hadasho adoo horey u cunay dimuqraadiyadii Mursi lagu doortay ka dibna Mursi laftiisa dilay.
– NATO waxaan leehay; Turkigu waa dawlad ka mida NATO, waxaan nahay dawladda shanaad ee bixisa kharashaadka NATO, idinka yeelimayno in aad daawataan kiiyoo dawlad NATO kamida ay soo weerarayaan kooxo argagixiso ah.
– Reer Yurub waxaan leeyahay; Haddii aad joojin waydaan hawlgalkayaga Suuriya in aad isticmaar ku sheegtaan annaguna waxaan ooda ka qaadi doonaa 4 milyan oo qoxooti Suuriyan ah ee aan idinka horjoogno.
– Waxaa duulaankayagan dhaliilaya waddamo carbeed oon hal qof oo qoxooti Suuriyaana aan haynin, annagu dhulkan aan kurdiyiinta ka saarayno waxaan ka dhisaynaa magaalo aan dajin doono hal Milyan oo qoxooti Suuriyaan ah.
Dambiile Bashaar Al- Asad isaga waxaaba igaga filan in uu yahay ninkaa dilay Hal milyan oo dadkiisa ka mida kuna dilay hubkii dalkooga, Asad waa Mujirim.
Dagaalka an kurdiyiinta kula jirno waxaa war xun ka gudbinaya Warbaahin edeb-daran. Annagu Illaahay ayaan ku tiirsannahay, ilaahay hala jiro ciidankeenna. Aad baad u mahasantihiin. Wasalaamu Caleykum.